Ukukhuphela i-APK ye-Android ye-Android [Inguqulelo yamvanje] - uLuso Gamer
Imifanekiso isazisa utshintsho kubomi babantu. Ukusuka ekugcinweni kwembali yangasemva ukuya kumanqaku ememori ukukhumbula kunye nokuvuya ngexesha elidlulileyo. Kodwa i-Ivive APK ithatha loo mdlalo ukuya kwinqanaba elitsha lonke.
Imifanekiso kunye nemifanekiso ithwala iintsingiselo ezahlukeneyo kubantu abahlukeneyo. Nokuba umntu ngamnye, banikezela imbono eyahlukileyo ngalo lonke ixesha bejongwa. Ngamanye amaxesha basinceda ukuba sibale iinkumbulo zethu, ngamanye amaxesha baba kuphela komthombo wolwazi kuthi, babalisa amabali, babelane ngamaxesha, kwaye baphathe ixesha elidlulileyo kunye nathi.
Ke, ngeli xesha lobukrelekrele be-Artificial kunye ne-realugmented ye-augmented ikuvumela ukuba kuguqulwe ezi zixhobo kunye nobuncwane bube yinto yokuhla komhlathi. Ukuba ufuna njalo, fumana i-Ivive App yefowuni yakho ephathekayo ye-Android okanye ithebhulethi mahala kweli phepha.
Yintoni i-Ivive APK?
I-Ivive sisixhobo esinika imbonakalo entsha kunye noqikelelo kwimifanekiso esijonge kuyo. Isebenza le nto ngokuzenzekelayo ngokusebenzisa inyani engathandekiyo ekwaziwa. Oku kudala ubungakanani obutsha obumangalisayo bokuziva kunye nokubonakala komfanekiso, ngokongeza imifanekiso emangalisayo.
Ke kutheni unganiki ubomi kwimifanekiso yethu. Nanini na xa sibajonga mabayeke badlule ngaphaya koko sinokucinga ngokusebenzisa ingqondo yethu. Xa sisebenzisa iingcinga zethu, masibe zezokunyaniseka, kunemida. Ayisiyethu sonke iPicassos okanye uVan Goghs.
Oko kuyithethwayo. Ke ntoni ukuba asinakuba nomfanekiso ngqondweni wombhali we-Avatars okanye amagcisa adumileyo. Singayiqesha itekhnoloji ukuba isenzele oko.
ubungakanani 31.13 MB
Igama lepakheji com.ivive
Iyafuneka i-Android 4.3 nangaphezulu
Kwaye ukuba uqhelene nenyani engathandekiyo ungazi ukuba inempembelelo kangakanani kwindlela yethu yokubonana kunye nokujonga ilizwe.
I-Ivive App inawo onke loo mandla afunekayo ukuthatha ubuchule bokuya kwinqanaba elingaphaya komntu. Ukuba awuqinisekanga ukuba sithetha ngantoni. Jonga usetyenziso lwakho ngokwakho ngokusebenzisa isixhobo sakho se-Android.
Amava ehlabathi lokufota kunye nemifanekiso ngendlela entsha. Yibone ishukumayo kwaye uxelise ubomi ngeendlela ezintsha, ezothusayo kunye nezingalindelekanga.
Nje ukuba wenze oopopayi oqaqambileyo ngomfanekiso wakho owuthandayo, lixesha lokuba wabelane nabahlobo bakho okanye kwimidiya yoluntu ukuze ukoyike abalandeli bakho.
Uyikhuphela njani i-Ivive APK?
Ukufumana le app eyoyikekayo kwi-smartphone yakho landela nje amanyathelo njengoko ephantsi.
Okokuqala, yiya kwikhonkco lokukhuphela apha ngezantsi kwaye ucofe i-APK yokukhuphela
Yiya kwisitoreji sedatha xa inkqubo yokukhuphela igqityiwe kwaye ufumane ifayile.
Thepha kuyo ukuqala ukufakwa
Yenza ukhetho lwezixhobo ezingaziwayo ukusuka kuseto lwefowuni
Thepha amaxesha ambalwa ngakumbi kwaye ulapho.
Ngoku ungayifumana i-Ivive APK kwisikrini segajethi kwaye ucofe ukuyivula. Ngoku unokongeza imifanekiso kwaye ubone umlingo. Inye into ekufuneka iqatshelwe kukuba ayizukusebenza ngemifanekiso yonke. Ukusebenza kunqunyelwe kwimifanekiso oza kukuxelela yona i-software kunye nomqondiso we icon.
Into efanayo kuwe:
I-Ivive APK yindlela eyoyikisayo yokujonga imifanekiso ngendlela yenoveli. Ngoncedo lwento yokwenene ukungqinwa, ikunika amava amangalisayo. Ukonwabela le app ekhethekileyo ngeedisk ezigcweleyo fumana ifayile ngokufumana ikhonkco lokukhuphela kwi-Android yakho.
iindidi apps, ukonwatyiswa tags IVive APK, I-App ye-Ivive Post yokukhangela
Movidy Apk Ukhuphelo lwe-Android [App yokuZonwabisa]